जीएसटी बिललाई भन्सारले नमान्दा समस्या | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) जीएसटी बिललाई भन्सारले नमान्दा समस्या
on: January 26, 2018 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
जीएसटी बिललाई भन्सारले नमान्दा समस्या
अध्यक्ष, वीरगञ्ज भन्सार एजेण्ट सङ्घ
वीरगञ्ज भन्सार एजेण्ट सङ्घले व्यावसायिक सरोकारमा कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ?
जसरी नदी निर्माणमा सहायक नदीको भूमिका हुन्छ, त्यसरी नै राजस्व सङ्कलनमा भन्सार एजेण्टहरू अभिन्न अङ्ग हुन् । भन्सार एजेण्टलाई पूर्ण व्यावसायिक कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौं । यो पेशामा गलत मनोवृत्तिका केही मानिसको प्रवेशका कारण सम्पूर्ण एजेण्टको छविमा असर पुगेकाले शुद्धीकरणको प्रयास थालेका छौं । हामी भन्सार एजेण्ट एउटा विशुद्ध व्यावसायिक पेशा हो भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । पेशागत मर्यादालाई कायम राखी कसरी पूर्ण व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा ध्यान दिएर त्यसअनुसार काम गरिरहेका छौं ।
पेशागत शुद्धीकरण कसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ ?
वीरगञ्जका एजेण्ट पहिचानका लागि हामीले ड्रेस कोड र परिचयपत्र अनिवार्य गरेका छौं । यसले पहिचानमा सहज भएको छ । अर्को, यहाँ ४० वर्षदेखि काम गरेका इमानदार माानिसले लाइसेन्स पाएका छैनन् । उनीहरूलाई भन्सार विभागले लाइसेन्समा प्राथमिकता दिनुपर्छ । जस्तो पायो, त्यस्तोलाई दिनु भएन । जथाभावी दिँदा दुरुपयोग हुन्छ । कतिपय भन्सारै नदेखेका मानिसको नाममा जारी भएका लाइसेन्समा पनि काम भइरहेको छ । यस्ताबाट हाम्रो पेशा बदनाम भइरहेको छ । यसको शुद्धीकरणका उपायमा एजेण्ट, भन्सार र व्यवसायीबीच आपसी सहकार्यको खाँचो छ ।
यस क्रममा एजेण्टहरूले सामना गर्नुपरेका समस्या कस्ता छन् ?
अहिले भन्सार मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी समस्या छ । भन्सारले सन्दर्भ मूल्य तोकेको छ । हामीले आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको कागजात पेश गर्ने हो । भन्सारले त्यसलाई मान्दैन । भारतमा जीएसटी लागू भएको छ । त्यताबाट आएको आधिकांश बिल अब जायज हुन्छ । भारतीय भन्सारमा पेश गरेको बिलबीजक र कागजात आएपछि मात्र यहाँबाट भन्सार पास हुन्छ । त्यो मूल्यलाई मान्यता दिने हो भने समस्या समाधान हुने थियो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । जीएसटी बिललाई भन्सारको मूल्य किताबमा तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । भारतबाट जीएसटी बिल आउन थालेपछि शुरूमा केही दिन मान्यता दिइएको थियो । तर, पछि भन्सारले हुँदैन भन्यो । अहिले दिनहुँ मूल्याङ्कनकै कुरामा समय खेर गइरहेको छ । केही व्यवसायीले बदनियत पनि राख्यो होला । यसो भन्दैमा बहुसङ्ख्यकलाई समस्यामा पार्नु उचित हुँदैन । अर्को, हार्मोनिक कोडमा समस्या छ । कतिपय विषयमा एजेण्ट सक्षम छैनन्, कतिमा भन्सारका कर्मचारी जानकार छैनन् । हामी एउटा कोड भन्छौं, उनीहरू अर्कै भन्छन् । यस्तो समस्याको निक्र्योलका लागि पहिला रिडर्स टीम थियो । अहिले त्यो छैन । विभागमा सोधेर गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।
भन्सारको कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रविधि अद्यावधिक गरिएपछि कत्तिको सहज भएको छ ?
प्रविधिमा सुधार त राम्रो कुरा हो । यसको उद्देश्य पनि उत्तम छ । पहिला एजेण्टहरू जाँचकीलाई खोज्दै हिँड्नुपर्थ्यो । अहिले भन्सारमा आसिकुडा वर्ल्ड लागू भएपछि जाँचकीहरू हामीलाई खोज्दै हिँड्छन् । तोकिएको काम पूरा नगरी जाँचकीले अर्को काम गर्न सक्दैनन् । यसले सहज त भएको छ । प्रविधिमा बारम्बार आइरहने अवरोधका कारण भने अत्यन्तै समस्या भइरहेको छ । अनलाइनबाट काम हुने भएकाले सर्भर डाउन हुँदा सबै काम रोकेर बस्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याका कारण कुनै कुनै दिन त भन्सारले १ रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन सक्दैन । यसका बारेमा भन्सार विभागलाई पनि आग्रह गरिएको छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।